HomeWararka CiyaarahaBarcelona oo dooneysa inay Matthias Ginter keento Camp Nou.
November 5, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Kooxda Barcelona ayaa lagu soo waramayaa in ay doonayso in ay si xor ah kula soo saxiixato xiddiga kooxda Borussia Monchengladbach ee Matthias Ginter .
27-sano jirkaan ayaa mar kale u ahaa ciyaaryahan muhiim u ah kooxdiisa Jarmalka intii lagu jiray ololihii 2021-22, isagoo u saftay 10 kulan tartamada oo dhan, oo ay ku jiraan siddeed ka mid ah kulamada Bundesliga.
Qandaraaska Ginter ee Borussia-Park waxa uu dhacayaa xagaaga soo socda, inkastoo daafaca dhexe uu xor u yahay inuu wadahadal la yeesho kooxaha ajnabiga ah bilowga 2022.
Sida laga soo xigtay Fichajes , Barcelona ayaa u aqoonsatay xiddiga heerka caalami ee dalka Jarmalka bartilmaameedka koowaad, iyadoo kooxda reer Catalan ay eegayso saxiixyo jaban sababo la xiriira dhanka dhaqaalaha.
Warbixintu waxay sheegtay in da’da Ginter iyo waayo-aragnimadiisa ay soo jiidatay kooxda reer Catalan, halka uu si raaxo leh ugu habboon yahay qaab dhismeedka mushaharka kooxda.
Jarmalka, oo sidoo kale lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Real Madrid , ayaa dhawaan sheegay inuu u furan yahay inuu qandaraas cusub u saxiixo Monchengladbach.